Wasiirad Khadiija diiriye oo lasheegay in TV yada Astaan iyo Muqdisho Keybal ka mamnuucday Garoomada Kubada cagta Sabab? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Wasiirad Khadiija diiriye oo lasheegay in TV yada Astaan iyo Muqdisho Keybal ka mamnuucday Garoomada Kubada cagta Sabab?
(07-12-2017) Warar aan ka helanay ilo lagu kalsoonyahay ayaa Shabekada qalinkacayaaraha u Xaqiijiyey in Wasiirada Wasaarada Dhalinyarada iyo Cayaaraha Soomaaliya Khadiijo Maxamed diiriye ka mamnuucday qaar ka mid ah TV yada loo kalka ah in ay Cayaaraha si Live ah u sii daayaan isla Markaana ay yimaadaan Garoomada kubada Cagta xili ay Galabta dhacaysey Xaflada furitaanka Cayaaraha Maamul Goboleedyada Soomaaliya.
Wasiirad Khadiija Maxamed diiriye ayaa lacadeeyey in ay Warqad u qortay Taliyaha Ciidanka booliska saldhiga Bari kuna amartay in TV yada Astaan iyo Muqdisho Kaybal aysan wixii hada kadanbeeya soo gelin Garoomada Kubada Cagta isla Markaana aysan wax shaqo ah kaqaban inta ay joogto Xafiiska Wasaarada Cayaaraha dowlada Soomaaliya.
Sababta keentay in TV yada laga mamnuuco Garoomada kubada Cagta Muqdisho ayaa lasheegayaa in ay ku timid kadib markii TV yada lamamnuucay qaateen Go aan ah in aysan tagin Garoonka Banaadir kadib markii ay maqleen in heshiis lacag badan ah lala gaaray TV ga Universal iyaguna ay doonayeen in lasiiyo lacagtaas oo kale ama aysan qaban shaqadii looga bartay baahinta tooska ah ahayd.
TV yada Astaan iyo Muqdisho Kaybal ayaa ah kuwa ugu badan ee laga daawado Cayaaraha kubada Cagta ee ka dhaca Garoomada Muqdisho iyaga oo lahaa Faa iido in dadweynaha Muqdisho Live u daawadaan Cayaaraha lookalka ah ee dalkeena Soomaaliya.